Armati Udza iwe Low-Kuyerera Shower Fixtures: Types, Benefits uye mari
Low-kuyerera Fixtures kunge zvitaure nevamwe The National Energy Policy Act. Low-kuyerera Fixtures inogona muridzi weimba pamwe zvinokosha nemari uye kuva inogona kuenderera chiyero mu yagadziriswa yako kana chokuvaka. Low kuyerera Fixtures zvakadai zvimbuzi, tepi aerators, uye yokugezera misoro, anogona kupa zvakafanana utility kana zvichienzaniswa vasiri yakaderera-chokubuda Fixtures.
Low kuyerera yechigarire vagadziri siyana pamusoro zvigadzirwa zvavo kushandiswa, Asi vanogona kupa zvakafanana, uye nzira itsva vari okurega kushandiswa pasi chokubuda Fixtures.
Low Kuyerera Shower Namachinda
Low kuyerera shawa misoro ndivo aibuda yevanhu zvishoma pane 2.5 GPM ari mvura kumanikidzwa 80 makirogiramu por mativi padiki (psi). Zvisinei, munguva pfupi yapfuura pasi chokubuda yokugezera misoro vanogona kunyange kupa aibuda yevanhu asingasviki 2.0 GPM. The mhando mbiri inokosha yakaderera chokubuda shawa misoro vari:
Laminar-kuyerera - Laminar-kuyerera yokugezera musoro uchava kuumba dzemvura uye achapa ane zvakarurama tembiricha kuzvidzora.
Aerating - Izvi mhando yakaderera kuyerera yokugezera musoro uchava vanosanganisa mvura pamwe mhepo wezvamatongerwe pwititika mhando mvura pfapfaidzo. Izvi achasika zvizhinji kwazvo hwemvura uye mwando, uye mune nyorovera okunze haana inokurudzirwa.
Low kuyerera shawa misoro vanofanira kutsiva vakwegura kuti vakasikwa aibuda yevanhu 5.5 GPM.
Low Kuyerera Toilets
Low kuyerera zvimbuzi uye Ultra-shoma chokubuda zvimbuzi kunge yakagadzirwa kushandisa hafu uwandu mvura zvetsika zvimbuzi. Low kuyerera zvimbuzi zviri avhareji 1.6 GPF, panzvimbo 3.5 GPF.
Magadzirirwo kuderedzwa kuyerera zvimbuzi yave pasi moto nokuda vanoti dzimwe mhando havagoni Kugeza chimbuzi nenzira nyatsoshanda nzira. Gare gare nzira uye zvimbuzi waivako vave upgraded kuzorora matambudziko aya, uye vari zvakagadzirirwa, ruzhinji, pamwe nehafu chomumba chingaitwa mvura dongo uye rizere chomumba kuti hwakasimba kwetsvina.
Vazhinji pasi kuyerera zvimbuzi zviri vakagadzirawo kuderedza matambudziko kuzadza nekuti kwavo abudise chikamu vakwanise.
Giravhiti-Fed Low Kuyerera Toilets - mhando iyi yakaderera kuyerera chimbuzi inoshandisa chinyakare kurema mvura kusunda pasi mundiro. Ndivo isingadhuri uye zvishoma ruzha kuti kufurirwa-akabatsira pasi chokubuda zvimbuzi.
Pressure-Assisted Low Kuyerera Toilets - Izvi mhando yakaderera kuyerera chimbuzi rinowanzova noisier asi anogona kuderedza mvura kudyiwa ne 45% kana zvichienzaniswa giravhiti-zvokudya zvimbuzi. ino anoshandisa mhepo nevezera yakavakwa mukati tangi kusunda mvura pasi.
Old singi faucets kunogona kutambisa mvura yakawanda uye mari. Unofanira kufunga kutsiva faucets yenyu kana inoshandisa kupfuura 2.5GPM. Pane vaviri pfungwa kuti unokwanisa kusarudza kubva kutsiva chikare faucer. Unogona kusarudza kuti atsive nezvinoitika tepi itsva, kuine zvishoma pane 1.5GPM kana kugadzwa nomunhu aerator. The aerator kana kuyerera restrictir inogona kuwedzerwa chero tepi, kugovera nyore uye zvakachipa nadzurudzo ane kuti achaponesa iwe mari pamusoro kwemakore.
Mutengo Kubatsira Kushandisa Low Kuyerera Fixtures
Low-kuyerera Fixtures anogona zvechokwadi zvinoda mamwe upfront mutengo kuti vasatora kana vachienzaniswa nezvaiitwa Fixtures.
Zvisinei, sezvo vazhinji kuvaka Codes zvinoda kuti yakaderera aibuda Fixtures, hatina vakaongorora sei mari achaita izvi mhando Fixtures anogona kuwedzera kuvaka kwako chaiko. Zvichienderana mugadziri, kumboenda chimbuzi hungada pakati $ 75 uye $ 450, chete yechigarire. A pasi kuyerera chimbuzi inogona mari inenge $ 100 zvakawanda zvichienderana mugadziri, asi payback kuti mutengi aigona kuva makore sezvo zvokudya zvitatu nokuda nemari iri mvura kushandiswa.
Low-Kuyerera Fixtures Benefits
Low-kuyerera zvimbuzi anogona kuponesa kupfuura 20,000 marita mvura pagore kuti mhuri ine mana-nhengo
Available munyika siyana ruvara uye zvitaera.
Nokudzorwa International Association of Plumbing uye Mechanical Machinda (IAPMO)
Vanofanira kusangana chakakodzera American National Standards Institute (ANSI)
Water-vakarongeka zvimbuzi mari yako pamwedzi mvura bhiri.
Armati Udza iwe sei Repair Common Water tepi Problems
Yanhasi mvura faucets zvava yakagozha, uye basa kugadzwa kana troubleshooting faucets izvi kwave kwakaoma. The nzira hwokugadza tepi ndiro muitiro pfupi asi Michina yanhasi kunounza yakasiyana zvinoriumba kuti unofanira kungwarira.
Common tepi Issues
Kamwe yava hwakabatana, dzimwe nyaya zvingaitei chokupika tepi wako, zvakadai idonhe, squeaks uye mamwe matambudziko.
Ngatiendei pamusoro zvimwe nyaya uye sei kuagadzirisa.
Kazhinji, pasi mvura kufurirwa kubva tepi kunokonzerwa kwayo sprayer diverter. The diverter vharafu duku chimedu riri mukati tepi muviri. The diverter anodzora mvura kupinda tepi, saka unofanira kuongorora kuti chakanaka-zvinganzi tsinga pamwe zvakapwanyika diki uye zvicherwa. Kana diverter isina tsinga, ungada kutsiva diverter.
Imwe nzvimbo kuti mugova muparanzvongo iri pasi mvura nevezera ndiyo aerator. The aerator kufanana diverter inogona kucheneswa aine bhurasho uye kuchenesa mhinduro. Munogona kuedza kushandisa vhiniga kubvisa zvinhu uye unclog nayo.
Pakupedzisira, iva nechokwadi chokuti dambudziko haisi mvura kufurirwa vachibuda utility uye kuongorora kuti mvura mavharuvhu anoposhwa vose panzira.
Mwaya Misting kubva tepi
Kana mvura bhurandi mhute kubva huru chekubuda kana iwe kushandisa tepi, ungada kuongorora kuti aerator iri Volt zvakasimba.
Shandisa mumakwenzi kana jira kubvisa zvicherwa, tepi kana marara kubva aerator, sezvo raigona tsinga. Iva nechokwadi kuti uyewo kutarisa aerator pesin.
Reinstall kuti aerator uye tarisa zvakare. Kana dambudziko ndichiri rinoratidza unofanira kutsiva aerator sezvo zvinganzi wakatsemuka kana kukuvaradzwa.
Tepi Bata idonhe
Kana ukaona kuti mvura tepi idonhe, edza tightening kuti chiputiriso nati pa mubato, sezvo izvi zvinogona kukonzera kuti buri.
Dzimwe nguva dzaparadzwa O-mhete anofanira kutsiviwa.
Kutsiva O-mhete, akavhara mvura yaivakwanira mutsetse, nekukatanura tepi uye kutsiva katuriji kana zvakakodzera, zvichienderana dambudziko kuti iwe zvichikunetsai. Kana kutsiva iwe zvenzeve, wachenesa mukati muromo uye kunze vharuvhu muviri. We vanotiwo lubricating muromo Haiwa zvenzeve pamwe silicone anotsanangura girisi.
Inodonha kubva muromo
Chimwe chinetso wakajairika inodonha kubva tepi muromo. Kana uri nekuisa compression Style tepi, unofanira kutsiva chigaro pesin uye / kana kutsiva vharuvhu chigaro.
Nokuti vamwe vose mvura faucets, ukangogamuchira vanofanira kutsiva vharuvhu chigaro.
Kana iwe kutinhira mushure iwe kudzima mvura tepi Zvingatiomera mvura sando. Izvi zvinogona kugadziriswa kugadzwa ane mhepo yomukati.
Kana akatogadza mhepo makamuri, kudzima mvura, ubvise mvura mutsetse nekuvhura mvura shure zvakare. Kana ruzha kunoitika pashure mvura tepi dzikava pamusoro, vharuvhu zvingakuomera mumwe pesin idzva, kana kuti mvura nezvinonetsa romugove mutsetse iri kana kukwirira kana akanyanya yakaderera.
Tepi Bata Zvakaoma Unoshanda
Kazhinji yakaoma kuti ishande mubato kungazoguma nekuti sediments kana marara zvakakuvadza ari katuriji.
Marara, simbi zvidimbu uye zvicherwa aigona kukuvadza chisimbiso mukati katuriji.
Unogonawo vanofanirawo kutsiva katuriji kana tsvedzesa pamwe silicone anotsanangura girisi. Usashandisa puramba kuti tepi giredhi girisi, nesilicon bhurandi kana mafuta kuti ingasanganisira peturu. Petroleum anotsanangura lubricants vanogona sei pamwe rabha zvisimbiso uye aigona kukonzera mubato kuti unyatsova zvakaoma kushanda.
Armati Dzidzisai imi Tungamirira pamusoro sei Sarudza Chakanaka Plumbing Pipe
Kune mhando dzakawanda mapaipi pombi dzemvura nokuda dzinogarwa kana zvokutengeserana zvivako. Zvikwepa Plumbing akadai PEX, Copper uye PVC anoshandiswa anowanzoita zvichienderana chikumbiro chavo uye nzvimbo umo vari iiswe. Uyezve pane vamwe pombi dzemvura mutopota mhando dzakadai dema, kwakakurudzira nendarira. Ngatione pazasi yakanakisisa chikumbiro nokuda rakajairika kushandiswa pombi dzemvura.
Stainless Steel Zvikwepa
Stainless simbi nyere. Photo Hans Pixabay
Stainless simbi anogona kutarisa zvakatsvinda chaizvo asi zviri expensive.Stainless chaizvo simbi mutopota zvinoshandiswa munzvimbo pasi ngura uye pedyo kumahombekombe munzvimbo. Izvi mhando mutopota inowanika zvose kuchinja uye vanachandagwinyira uye vachada zvimwe okubatanidza chaiwo kubatanidzwa nemamwe marudzi pombi. Regai kunyonganisa Stainless mapaipi simbi pamwe kwakakurudzira pombi. Inowanika hukuru siyana uye yakareba.
PEX muridzo unoridzirwa
PEX pombi zhinji. Photo Makdesignbuild.com
Pex muridzo unoridzirwa chinhu anonzwisisa epurasitiki muridzo unoridzirwa razova yakakurumbira kusarudzwa muna dzinogarwa uye duku mabhizimisi zvikumbiro. Kunyange zvishoma yepamusoro kwokutanga cost, ayo usingashandi kuvariritira uye nokutsanya kugadzwa kwacho zvinoita yakanakisisa nenyere kuti aparadzirwe mvura mukati chivakwa. PEX muridzo unoridzirwa inopa here vhinza-isina chigadzirwa chinopiwa zvakanakira pamusoro mhangura muridzo unoridzirwa. Chimwe chezvinhu zvinokosha zvainovhiringidzawo ndechokuti hazvigoni kushandiswa panze mafomu nokuti UV mwaranzi vanogona kukuvadza pane panze epurasitiki rukoko.More
Copper muridzo unoridzirwa Zvinoshandiswa Plumbing
mhangura Yakachena mushure rangoitika. Photo Cedarcityrecycling.com
Pamwe Zvikwepa Copper ndiyo inonyanya chinyakare pombi dzemvura mutopota kushandiswa nokuda nguva yavo yakakura uye rakavimbika. Vanopa mukuru ngura nemishonga, zvinhu zvikuru kushandiswa kupisa nokutonhora mvura, uye chinogona vakakwanisa nyore. Zvisinei, chinonyanya kukosha chokufunga nezvacho asati kushandisa mhangura muridzo unoridzirwa ndechokuti anofanira soldered pamwe uye kungada okuwedzera Fittings. Haasi munhu wose ari zvakanaka zvikwepa yemhangura pokunamatidza asi nyaya sei Solder Copper Zvikwepa vangakubatsira.
PVC muridzo unoridzirwa
PVC nyere. Photo publicworksgroup Flickr
PVC Zvikwepa pombi dzemvura inoshandiswa mvura inotonhora uye inopisa potable sezvo zvakanaka tsvina zvikumbiro. PVC pombi siyana pamusoro ukobvu dzavo uye configuration zvichienderana chikumbiro apo ichashandiswa. Somuenzaniso, zvikwepa kumanikidzwa mvura, hazvina kufanana mapaipi mapaipi, uye kwete kufanana ndivo inoshandiswa musi dutu abudise enyika. Plastic pombi dzemvura zvigadzirwa rakagadzirirwa potable mvura zvikumbiro kazhinji akasarudzwa ne kana "NSF-PW" kana "NSF-61" kuratidza kuti ari chigadzirwa sezvarayirwa utano zvinokonzerwa zvinodiwa NSF / ANSI Standard 6.
Kwakakurudzira Plumbing Zvikwepa
Kwakakurudzira nyere. Photo Home dhepoti
Kwakakurudzira muridzo unoridzirwa yaishandiswa akawanda apfuura sezvo mureza dzinogarwa zvirongwa. Zvisinei, pamwe nguva rinoshandiswa zvishoma kakawanda nokuti nengura anogona kuvaka mukati diki pombi dhayamita. Kana nenyere akura zvakakwana, ipapo unogona kuona mvura ichibva tepi nengura zvisaririra sezvo pakafunuka anogona kutyora kusununguka mukati nenyere. Kwakakurudzira pombi zvinogona kushandiswa kutakura wachena mvura kana dzisiri potable mvura.
Brass Zvikwepa Zvinoshandiswa Plumbing
Brass pombi. Photo EugenesDIYDen Pixabay
Zvikwepa Brass pombi dzemvura zvinopa ngura nemishonga huru muridzo unoridzirwa, kana zviri chakagadzirwa 67% kuti 85% mhangura. The yakanakisisa nendarira mutopota giredhi inotengwa kana chiwanikwa rine 85% zvemhangura uye inonzi tsvuku nendarira nenyere. Brass muridzo unoridzirwa inopa refu zvinhu zvechigarire usingabereki ngura mukati menyika uye hazvina kunokonzera kukweshera Nokurasikirwa mukati nomutopota. Zvikwepa Brass pombi dzemvura dziri nyore neshinda pane mapaipi simbi uye yakanaka hot-mvura huru kuparadzira enyika, zvakadai pombi Fittings, matangi emvura, uye matsime. Brass nyere anowanzoita zvinoodza kwenguva yakareba kupfuura dzimwe pombi zvinhu. Kazhinji Brass nyere anouya 12-rutsoka ngaatarire yakareba.
Kandai Iron muridzo unoridzirwa
Kandai simbi nyere. Photo McWane, Inc.
Kandira simbi Zvikwepa pombi dzemvura dziri anowanzoitwa kugadzirwa sezvo bhera-uye-spigot mhando. Rinogona kuwanikwa pamwe Threaded majoini asi anodhura kupfuura bhero uye spigot mumwe. Zvikwepa ava kunorema kupfuura zvimwe pombi, yaiwanzoshandiswa kuti aparadzirwe mvura mugadziriro, kana pevhu kugadzwa sezvo huru nepombi iri abudise kana mapaipi enyika. Zviduku saizi kuti kazhinji ndiko manufactures ndiye 4 "mutopota, rakakura zvokuti kushandiswa pamusoro dzinogarwa mafomu. Kandira simbi nenyere rinorema uye anofanira aitsigira paunenge vaungane pamwe.
Armati Udza imi Toilets: Toilet Kutenga Guide Tips
Zvimbuzi zviri kukosha midziyo yaishandiswa nguva dzose uye mumwe kupfuura kurerutswa nezvidimbu imba yokugezera. Vanhu ichanyanya zvakawanda pamusoro mutabhu yokugezera kana nematuro panzvimbo pokufunga chimbuzi. Kune mhando dzakawanda zvimbuzi, akadai chetsika, pasi pamwero, vakadzokera rusvingo, rusvingo akarembera, uye zvakawanda. Asi zvinokosha zvechokwadi kuziva kuti havasi vose zvimbuzi zviri mureza zvimbuzi. Saka iva nechokwadi kuti tione yedu chimbuzi achitenga guide.
Chimbuzi Kutenga Guide
Izvi chimbuzi achitenga gwaro kuchakubatsira pamberi ukatenga yako inotevera chimbuzi. Saka iva nechokwadi kuti:
Sarudza kana unenge uchishandisa chimwe kana zviviri chidimbu chimbuzi
The yasarudzwa chimbuzi uchava zvaidiwa vemo mitemo
Sarudza mhando naro
Uyere nzvimbo inowanikwa apo chimbuzi achapiwa iiswe
Kana zvichiita, edza kutenga chimbuzi kubva vakapiswa zita
Sarudza pakati raundi kana elongated chimbuzi mbiya
Kuwedzera kutenga richitungamirira, uyewo funga izvi zvakakosha chimbuzi zvinhu
Water Saving- Vamwe zvimbuzi aigona kuva mvura pfungwa advertising, mukuru-kushanda zvimbuzi Flushing pamwe 1.28 marita zvichidzika paminiti chomumba, sezvo tichienzanisa 1.6 marita ose kwakajairika zvimbuzi.
Dual Flush- Unoda sarudza chimbudzi kuti anogona kukupa kukwanisa kuva rushoma chomumba kuti mvura kana yakazara chomumba kuti hwakasimba tsvina?
Chimbuzi Bowl Height- Comfort zvimbuzi inokurukurwa sezvo vasiri chinyakare zvimbuzi. A mwero ndiro pomukombero iri pamusoro 15 masendimita pamusoro pasi, asi zvimbuzi mbiya pa 17 masendimita vanonzi yakanakisisa vaya. A 17 padiki uye kunyange 19 padiki chimbuzi mbiya kukwirira achava achiita zvaidiwa vekuAmerica pamwe Nourema Act.
Bowl shape- An elongated ndiro, kunyange anopindura zvakawanda nzvimbo, anopa zvakawanda nokugara nzvimbo uye anobvumira kunhuwirira vashoma kupukunyuka. Torai ichi kufunga somunhu elongated mbiya aigona kuva kuna 6 "yakareba kupfuura mwero mbiya.
Mumwe Piece Toilet- Two piece zvimbuzi zviri isingadhuri pane chimwe chidimbu asi avanotarisira vaunganidza guruva pakati tangi uye mbiya. Mumwe-chidimbu zvimbuzi anodhura uye zvinogona kuzokuomera yokugadza pane maviri akaumbwa chimbuzi. Kana vaita ivo rinenge chete.
Chomumba Systems- Rubber flappers zvinhu zvekare. Tsvaka kuvatsva chomumba shongwe kuti vari kupfuura yakavimbika kupfuura kare flappers. Pressure-kubatsira zvimbuzi zvakawanda mvura-zvokufambisa flushers pane negiravhiti zvimbuzi.
Valve- Enda pashure zvimbuzi kuti dzinenge imwe 3 padiki chomumba vharafu. Traditional zvimbuzi vane 2 padiki vharafu kuti vakarwira shoma wafukidzwa pane vatsva.
Rough-muna Dimensions- Distance kubva musana rusvingo kuti mvura mutsetse suo dzinosiyana wokuenzanisira kuti zvinoedza, saka kumbira usati wawana chimbuzi yako itsva.
Noise- fuertes aigona kuva chinhu kana chimbuzi wako uchazochinja iiswe pedyo kumusoro kupfuura nemunyika nzvimbo.
Color- Kupfuura 80 muzana zvinofambidzana pashure zvetsika chena, kunyange vanhu vakawanda zuva nezuva vari kuedza mavara matsva zvekumwe.
Water Lines- Use kusanduka Stainless simbi mvura mitsetse pachinzvimbo kana vanachandagwinyira Chrome-akaruka mitsetse mhangura.
Vhara-Off Valve- Kune mhando dzakawanda kuti kubatana kuti rakavharwa-kure vharafu. Solder kubatanidza uye compression kubatana ndiyo inonyanya kushandiswa, asi kuva nechokwadi chokuti hauna pombi yekare simbi sezvo ivo zvingakuomera dzakasiyana kubatana yakati.
Ndivo pamusoro chimbuzi vagadziri kuti unogona kuwana muna US. Zvichaita zvose kuvimba yapfuura zvinhu uye zvakadini mari yeGmail.END_STRONG achida kubhadhara iri.
Toto-Toto ndeimwe guru 3 kuti chimbuzi vagadziri
Kohler- Kohler anopa zvinhu zvakanaka chaizvo panguva musoro mitengo.
American Standard-For yakaisvonaka mutengo, American Standard chimbuzi chinhu chakakodzera mukwikwidzi.
Armati Dzidzisai imi Towel Bar Installation Height Uye Other Bath Accessories
Towel Ring uye Other Bathroom Accessories Installation Heights
Bathroom zvishongedzo vanowanzoteerera chimwe achangobuda zvinhu iiswe kana yagadziriswa kana paivakwa rikurumidze. Zvisinei, kana usingazive sei uye kupi yokugadza yokugezera nenhumbi, zvino unogona kumhanya kupinda matambudziko makuru sezvo unogona drilling pamusoro usina kukonekita zvichikonzera kukuvadza nokuda zvisingakoshi kuchera. Heano mamwe dzakakwirira akatikurudzira kuti unogona kushandisa kana kugadzwa kuchimbuzi nenhumbi.
Rangarira nguva dzose kuti nekaviri bvunza wako chivakwa Codes omunharaunda uye ADA nhungamiro.
Vazhinji izvi varumbidzwa dzakakwirira anotorwa kubva International Residential Code (IRC), zvinodiwa vekuAmerica pamwe Nourema Act uye rakabudiswa National Kitchen & Bath Association.
Nezvionioni anogona kuiswa pa yakasiyana pakakwirira zvichienderana norudzi girazi kuitwa iiswe. Somunhu wakajairika, vaigona kuiswa pakati 38 uye 42 masendimita. chipimo uyu yakabatana nechepasi kukwirira girazi, akayera kubva kumugumo paburiro. My rutsigiro ndechokuti girazi anofanira kuiswa pamwe chete pasi unopinza kuratidza pamusoro hapana kupfuura 40 masendimita pamusoro kumugumo paburiro. Dzimwe nguva unenge uchida kuvakira mugirazi pamwe parusvingo uye maturo nokuda aesthetic zvinangwa. Zvinokurudzirwa hwokugadza chete wenguva yakareba girazi mu nerimwe washroom apo bhati richashandiswa voruzhinji.
Installation Height nokuti Bathroom echiShinto
EchiShinto vari akagadzawo panguva dzakasiyana kwakadzikira zvichienderana kushandiswa uye mhando pasherufu kuitwa iiswe. zvino Kazhinji anogona kuiswa pakati 3 tsoka uye 4 tsoka zvakare, sezvo mirrors.However, izvi zvichaita siyana zvichienderana norudzi zvimbudzi uye pane zvinenge itsva kuti niches pachinzvimbo echiShinto.
The sipo dhishi inofanira kuiswa pagungano anofungidzirwa kureba 44 nemainji kana yakakwirira sezvinoita 54 nemainji. The sipo dhishi kukwirira nzvimbo anofanira riri kubva yokugezera pfapfaidzo. Nepo sipo dispenser inofanira kuiswa pa risingamboshandisi 40 rakafara uye sezvo mukuru sezvo 48 nemainji. Zvakanakisa sipo dhishi inofanira kuiswa pa 48 nemainji; Zvisinei, kana munhu sipo dispenser, avo vanosiya mabhatani anofanira riri 44 "kunonyanyisa pamusoro FF.
The tauro mhete inofanira kuiswa pakati 50 nemainji uye 52 masendimita urefu, akayera kubva kumugumo paburiro. Kana uri kuyera kubva maturo ipapo anofanira akaturika 20-22 nemainji pamusoro payo. Kazhinji, Mhedziso shoma nokukwirira ndiye 36 "nokuti matauro, 18" nokuti kuwacha machira akayera kubva maturo countertop.
The tauro njanji kukwirira chokugadza achizosiyana zvichienderana mhando uye kushandiswa kuchimbuzi. The njanji haringapiwi iiswe panguva iyoyo pakakwirira kana yokugezera richashandiswa nevana. A tauro njanji anofanira kuiswa 48 masendimita pamusoro paburiro. Unoda kuongorora uyewo nzvimbo magetsi nehoro decoration Tile basa. Kana kugadzwa vakawanda tauro njanji, uyere nomumwe achava soro, uye ipapo peta jira panguva pamwero.
Mark 2 masendimita pazasi munharaunda apo tauro pasi uye kuti zvinofanira kuva nzvimbo hwokugadza pengarava wechipiri.
Chimbuzi Paper Roll wokuisira Height?
The tishu mupumburu mapedhi zvinogona kuiswa pakati 19 uye 26 masendimita kubva pasi. The vekuAmerica pamwe Nourema Act vade kushandisa 19 masendimita apo National Kitchen & Bath Association anokurudzira 26 masendimita sezvo yakanaka yakakwirira. Kana usina zvakawanda muchadenga, ungada kufunga achabatanidza nayo parutivi maturo.
Bathroom makabhati vari anowanzoitwa yakaiswa pa 54 nemainji pamusoro apedza paburiro. Ndizvo nokuti kazhinji ane 36 nemasendimita mwero maturo ndinoiitawo 18 nemainji ose pachena nzvimbo iri pakati. Dzimwe ibatanidzo girazi / cabinet anosarudzwa saka kuva nechokwadi kuti izvozvo akagadzawo pa 12 nemainji pamusoro countertop.
Bathroom Accessories Installations: Ivai nenzvimbo Bars
Tora nembariro igadzikwe kanenge 33 "-36" pamusoro paburiro. Kana installation ari kurutivi rusvingo tora bhaa achava 42 nemasendimita refu zvishoma, riri 12 masendimita kunonyanyisa neshure parusvingo uye kuvakoka 54 masendimita neshure wall.There hwokuwedzera ruzivo pamusoro sei kuisa tora nemizariro, sezvo ndakarumbidzwa vokuAmerica pamwe Nourema Act ari munyaya yedu pamusoro Ivai nenzvimbo mbariro.
Installation Height nokuti Hand Dryers
Hand dryers vane zvimwe chaiwo mirayiridzo, sezvo vaifanira kukwanisa kuti kuvhiyiwa nyore kushandisa shoma force.These dzakabatana chete uchasangana zvakananga ADA kukura mune rusarura kuti sei zvakawanda vanogona protrude uye inofanira kuva kubva achisiyanisa ruvara. The kusunda bhatani inofanira kuiswa pa 38 nemainji pamusoro FF pamwe vanenge yakajeka uriri inosvika 30 "X 48" pamberi them.When anopfuura rimwe ruoko Dryer ari yakaiswa, kuti chikwata yechipiri inogona kuiswa pakati 42 "-48" pamusoro rakapera paburiro.
Armati Dzidzisai imi sei Refinish mutabhu yokugezera
Update yokugezera yako unomutsiridza pendi iri mubhavha.
Regai Nature mu Uine Outdoor Shower
Outdoor inonaya havasi kuti poolside uye paruzhinji mahombekombe zvakare. Vari zvakasimba kuva kunozorodza kuwedzera zuva nezuva musha kuchimbuzi.
Armati Dzidzisai imi The Anatomy ane mutabhu yokugezera uye sei hwokugadza Replacement
Dzidza zvose pamusoro bathtubs kusanganisira sei kubvisa uye kutsiva chimwe.
Armati Dzidzisai imi sei yokugadza Anti-pisa Valve
Regai kungoerekana yokugezera mvura tembiricha kuchinja kuburikidza nekuisa ane Anti-pisa vharafu mu yokugezera yenyu.
Armati Dzidzisai imi sei hwokugadza Corner Shower
Ichi chiine asi Stylish yokugezera Kit anogona kusunungura nzvimbo mune kugeza duku.